Dzokera & kudzorera mitemo - Bayu Label
CHII CHINOTAURWA NEPARITI YOKUTAURIRA?
Tinobvuma kudzorera zvikamu zvedu zvose mukati me14-mazuva kubva pazuva rawakagamuchira kuraira kwako. Tinongokumbira kuti zvinotevera zvinosangana:
1. Item / s inofanira kunge iri mamiriro ekutanga pamwe nemitambo yekudzoka uye / kana chisimbiso chisimbiswa panzvimbo.
2. Item / s haifaniri kunge yakasakara, kushandiswa kana kushandurwa chero ipi zvayo.
3. Zvimwe zvinhu hazvifaniri kunge zvakasvibiswa kubva pakugadzira, kusvibiswa, kusuruvara kana chimwe chinhu chiripo pavari.
Hatigoni kubvuma kutora chero kupi zvayo kusingatariswi pamusoro pezvinodiwa.
Tinokurudzira muchidimbu chinhu chako pamusoro pepasi pako uye uchengetedze bhaini muhombodo munzvimbo yakachena kuitira kuti irege kugona kusvibiswa kana kusvibiswa nenzira ipi zvayo.
Muchiitiko chisingawanzi kuti chimwe chezvinhu zvedu chinoratidza kusakwana pakugamuchira, tapota tiudzei mukati memaawa e48 nokutitumira mufananidzo wekusakwana kwemaimeri uye kumiriririra mhinduro yedu.
- Hatisi kupa zvipo zvezvinhu zvakatengwa nekambiso kadiki ye20% kana kupfuura. Kana iwe uchida kutumira chigadzirwa chekutengesa zvakare, uchagamuchira kadhi rechipo (kuburikidza ne-e-mail).
Mari yekutumira haigoni kuvharwa nesu. (Tinongopa kadhi rechipo apo patinogamuchira purogiramu yekudzorera kuhofisi yedu, kana zvinhu zvichitarisana nezvinodiwa pamusoro apa tichanyorera kadhi kadhi kadhi kuburikidza ne-e-mail.)
- Hatisi kusungirwa nemutemo kuti tigamuchire kudzoka nokuti mabhasikoro edu uye mazamu akaiswa chisimbiso. Zvisinei isu tinozvigamuchira kuti tifadze vatengi vedu.
Ndapota tevera mirayiridzo yedu zvakanyatsonaka kuitira kuti tive nechokwadi chevatengi vedu, kusanganisira iwe, tichapa zvinhu zvakachena mumamiriro matsva akakwana.
NDINORONGA KUTI KUDZOKA KUTI KUTI KUDZOKE?
Kutanga kudzoka, zviri nyore tanga kutumira email isu at customerervice@bayuthelabel.com vachishandisa kero imwechete ye e-mail inoshandiswa kuronga zvinhu. Ndapota ivai munyaya ye email iyi izwi RETOUR uye wedzera nhamba yako yehuwandu (muenzaniso: RETOUR #1111). Ndapota kumiririra mhinduro yedu, tinowanzopindura mukati meawa 24 pamazuva ekushanda.